Kismaayo oo ka bilawday loolanka kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa. | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Kismaayo oo ka bilawday loolanka kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
Kismaayo oo ka bilawday loolanka kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
Magaalada Kismaayo waxaa Xalay ka bilowday Ololaha doorashadda Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland iyo ku xigeenadiisa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland ee shalay la dhaariyay ayaa Magaalada Kismaayo ka bilaabay in ay kulamo kala duwan la qaataan xildhibaanada iyo qeybaha kala duwan ee bulshadda.
Sheekh Cabdi Yuusuf Cali ayaa loo doortay in uu noqday Guddoomiyaha KMG ee Baarlamaanka Jubbaland, inta laga soo dooranayo Guddoon cusub.
Gudoomiyaha cusub ee ku meel gaarka ah ayaa wuxuu balanqaaday doorasho xor iyo xalaal ah, isaga oo Xildhibaanadda waydiistay in ay la shaqeeyaan.
Doorashadaasi ayaa waxaa xigi doonta tan madaxweynaha oo la rajeynayo in ay qabsoonto dhammaadka bishaan August ee sanadkan 2019, iyadda oo aad isha loogu hayo natiijadda kasoo bixi doonta.
Magaalada Kismaayo ee Caasimada Ku meel gaadhka ah ee Jubaland oo waayadii u dambeeyey la hayd Siyaasad labo waji ah ayaa waxaa geesta kale Xubnaha isbadal doonka ay wadaan Kulamo gaar ah oo magaalada ka dhacaya.
Magaalada kismaayo ayaa maanta waxaa ka dhacay kulan ay yeelanayaan musharaxiinta la magac baxay isbadal doonkaa oo ay hogaaminayaan Seerar,xidig iyo kuwa kale kuwaas oo sheegay in maanta ay arinsanayaan dhaarinta xildhibaanada Guddigooda doorashada shalay ay shaaciyeen.
Xubnahan oo qaarkood aynu la hadalnay ayaa inoo sheegay in magaalada ay kawadaan diyaar garowgii ugu dambeeysay eek u aadan dhaarinta xubnaha xildhibaanada ay magacoowdeen.
Siyaasadaha is diidan ee kismaayo kasoo cusboonaaneysa,waxaana wali ka hadal dowlada federaalka ee soomaaliya wallow kol hore waraaq kasoo baxday wasaarada arimaha gudaha soomaaliya lagu sheegay in aan marnaba dowlada aysna aqoonsaneyn natiijo walba oo doorashada jubaland kasoo baxda.
Beesha caalamka ayaa iyana waraaq ay dhaweyn u direen guddiga doorashada iyo xuduudaha jubaland kaga dalbadeen in ay soo cadeeyaan sida musharxiinta kale ee guddiga ugu kalsoonaan wallow kal hore oo todobaadkan ay ka jawaabeen guddiga.
Xisbiyada mucaaradka dowlada ayaa waraaqyo ay soo saareen waxaa ku bogaadiyaan guddiga doorashada jubaland oo ay sheegeen in nidaam iyo waqtigii doorashada sii loogu talagalay ay ku wadaan,balse hadana dowlada dhexe ayay si wadajir ah ugu wada baaqeen in ay faragalinta ka dhaafto doorashooyinka jubaland.
Is-qabqabsigan ayaa kusoo hagaagaya xili lagu wado in doorashadda madaxweynaha iyo Gudoonka baarlamaanka Jubbaland ay qabsoonto dabayaaqada bishan August 2019.
Previous articleAl-Shabaab oo Weerar ka geystay Gobolka Waqooyi Bari.
Next articleWasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo faah-faahiyay sawirkii ay wadagaleen Muuse Biixi.
Taabid Cabdi oo Cambaareeyay weerarkii Al-shabaab ee SYL
Maamulka Hirshabelle oo War kasoo saaray mowqifkooda Doorashada 2020/21
Golaha Shacabka oo u yeeray Wasiir ku dhow RW Kheyre
Sucuudiga oo burburisay Gantaalo lagu soo weeraray M/Barakaysan ee Makkah
Mareeg Ali - May 20, 2019 0
Ciidanka Difaaca Hawada Boqortooyada Sacuudiga ayaa maanta oo Isniin ah hawada ku burburiyay Laba gantaal oo ay kooxda Xuutiyiinta Yeman ku Tuureen magaalooyinka Dhaaif...